HP ကပရင်တာ PRINT ထုတ်ပါဘူး: OPTIONS ကိုပြဿနာဖြေရှင်းနည်း - ပုံနှိပ်စက် - 2019
အဆိုပါယာဉ်မောင်းကိုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သောနောက်ဆုံးအဘို့သင့်ကို PC ကချိတ်ဆက်ပြီးနောက်, သစ်ကိုပရင်တာနှင့်အတူစတင်ရန်ရန်။ သငျသညျနည်းလမ်းများစွာ၌ဤလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Canon ၏ MG2440 များအတွက်ယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်ပြီး
သင်လိုအပ်သောဒရိုင်ဘာ download လုပ်ပြီး install ကူညီရန်ထိရောက်သောရွေးချယ်စရာများပြားတဲ့ရှိပါသည်။ လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပေးထားလွယ်ကူပါတယ်။
ဖြစ်စဉ်ကို 1: device ကိုထုတ်လုပ်သူရဲ့ site ကို
ဒါဟာပထမဦးဆုံးရာဌာန၌ယာဉ်မောင်းကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ပါသည်လျှင်, အရာရှိတဦးကသတင်းရပ်ကွက်ကိုကိုးကားသင့်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအဘို့ပရင်တာထုတ်လုပ်သူရဲ့ website မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကို Canon ၏တရားဝင် website ကိုသွားပါ။
ပြတင်းပေါက်၏အထက်ပိုင်းမှာရှာတွေ့ "ပံ့ပိုးမှု" ထိုသို့ကျော် cursor ကိုရွှေ့။ ပေါ်လာသော Menu ထဲမှာ, စာလိပ် "Downloads နှင့်အကူအညီများ"သငျသညျဖွင့်လှစ်လိုသည့်အတွက် "ယာဉ်မောင်း".
အသစ်ကစာမျက်နှာပေါ်တွင်ရှာဖွေမှုလယ်ပြင်တွင်, device ကို၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်ပါCanon ၏ MG2440။ ရှာဖွေမှုရလဒ်ပေါ်မှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးနောက်။
မှန်ကန်သော input ကို device ကိုအသေးစိတျစာမကျြနှာပေါငျးတို့သလိုအပ်သောပစ္စည်းများနှင့်ဖိုင်များ်, ဘယ်အချိန်မှာပေါ်လာသည်။ အပိုင်းဖို့အောက်ကိုဆင်း "ယာဉ်မောင်း"။ ရွေးချယ်ထားသော software ကို download လုပ်ပါရန်, သင့်လျော်တဲ့ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
တစ်ဦးက window ကိုအသုံးပြုသူသဘောတူညီချက်၏စာသားနှင့်အတူဖွင့်လှစ်။ ဆက်လက်ရွေးဖို့ "Accept & download လုပ်ပါ".
ဒေါင်းလုဒ်ပြည့်စုံပင်ဖြစ်သည်ပြီးနောက်ဖိုင်ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် installer ကိုပုံပေါ်, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Next ကို".
နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ပြသသဘောတူညီချက်၏စည်းကမ်းချက်များ Accept "Yes" ကို။ ဒီမတိုင်မှီကသူတို့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ကိုထိခိုက်လို့မရပါဘူး။
သင့်ရဲ့ PC ကိုမှပရင်တာကိုချိတ်ဆက်နှင့်သင့်ရည်မှန်းချက်များ၏ရှေ့မှောက်၌ box ကိုစစ်ဆေးတဲ့နည်းလမ်းအပေါ်ဆုံးဖြတ်ပါ။
တပ်ဆင်ပြည့်စုံသည်အထိသင် device ကိုစတင်သုံးစွဲနိုင်သည့်ပြီးနောက်, စောင့်ပါ။
Method ကို 2: အထူးဆော့ဖျဝဲ
အဆိုပါယာဉ်မောင်းကို install လုပ်ဖို့အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခု Third-party software ကိုသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်နည်းလမ်းမတူဘဲ, အမရရှိနိုင်ပါလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမတယောထုတ်လုပ်သူကနေတိကျတဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲများအတွက်ယာဉ်မောင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်။ ဤအစီအစဉ်နှင့်အတူအသုံးပြုသူအားလုံးရရှိနိုင် devices များနှင့်အတူပြဿနာများဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။ ဒီလိုမျိုး၏ကျယ်ပြန့်အစီအစဉ်များအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်သီးခြားဆောင်းပါးအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်:
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: drivers တွေကို install လုပ်မယ့်အစီအစဉ်ကိုရွေးချယ်ခြင်း
ဆက်သွယ်စာရင်းထဲတွင်, သင် software ကို DriverPack Solution အရွေးနိုင်သည်။ ဒီပရိုဂရမ်ရိုးရှင်းသောထိန်းချုပ်မှု interface နဲ့ Non-နည်းပညာဆိုင်ရာအသုံးပြုသူများနားလည်ထားပါတယ်။ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၏စာရင်းမှာ drivers တွေကို install လုပ်ပါအပြင်ကိုသင်မှတ် restore ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ သူတို့မဆိုပြဿနာများပေါ်ပေါက်လျှင်ယင်း၏မူရင်းအခြေအနေမှ device ကိုပြန်လာခွင့်ပြုကတည်းကသူတို့ကဒရိုင်ဘာကို update များအတွက်အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်ပါသည်။
Read more: ဖြေရှင်းချက် DriverPack သုံးစွဲဖို့ဘယ်လို
လိုအပ်သောဒရိုင်ဘာကိုရှာဖွေရန်အသုံးပြုနိုင်နောက်ထပ် option ကို device ကိုအမှတ်အသားကိုအသုံးပြုဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ID ကိုမှရရှိသောနိုင်ပါသည်ကြောင့်အသုံးပြုသူ, Third-party အစီအစဉ်များ၏အကူအညီကိုသှားဖို့မလိုအပ်ပါဘူး "Task Manager ကို"။ ထို့နောက်အလားတူရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်သောဆိုဒ်များကိုတစ်ဦးအပေါ်ရှာဖွေရေး box ထဲမှာရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များရိုက်ထည့်ပါ။ တရားဝင်ဝက်ဆိုက်တွင်ယာဉ်မောင်းအလုပ်မလုပ်ဘူးဘို့သင့်ကိုရှာဖွေလျှင်ထိုကဲ့သို့သောနည်းလမ်းအသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည်။ ကို Canon MG2440 ၏အမှု၌ဤတန်ဖိုးများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်:
Read more: ID ကိုသုံးပြီးယာဉ်မောင်းများအတွက်ကိုကြည့်ဖို့ကိုဘယ်လို
ဖြစ်စဉ်ကို 4: System ကိုအစီအစဉ်များ
နောက်ဆုံး option ကိုအမျှ, သင်စနစ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ယခင်ဗားရှင်းမတူဘဲ, အားလုံးလိုအပ်သော software ကိုအဆိုပါ PC မှာပြီးသားအလုပ်လုပ်ရန်နှင့် Third-party က်ဘ်ဆိုက်များကိုကြည့်ရှုရန်မရှိပါ။ အသုံးပြုရန်စေရန်, အောက်ပါပြုပါ:
menu ကိုသွားပါ "Start"အရာအတွက်လိုအပ်ချက်ကိုရှာဖွေ "Taskbar".
ကိုသွားပါ "ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အသံ"။ ဒါကြောင့်၌သင်တို့ကိုနှိပ်ဖို့လိုအပ် "View devices များနှင့်ပရင်တာများ".
ပစ္စည်းအသစ်၏နံပါတ်တစ်ပရင်တာကိုထည့်သွင်းရန်, သင့်လျော်တဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ် "ပရင်တာဖြည့်ထည့်".
system scan အသစ်ကဟာ့ဒ်ဝဲ detect လုပ်ဖို့ကောက်ယူလိမ့်မည်။ ပရင်တာ၏ထောက်လှမ်းပေါ်၌ပေါ်မှာ click နှိပ်ခြင်းနှင့်ကို select "Install"။ ရှာဖွေရေးဘာမှရှာမပါဘူးဆိုရင်, ပြတင်းပေါက်၏အောက်ခြေတွင်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဒီလိုအပ်သောပရင်တာစာရင်းမနေသည်".
အသစ်က window ထဲမှာရွေးချယ်ရေးများအတွက်ရရှိနိုင်အများအပြားရွေးချယ်စရာလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ယင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့အောက်ခြေပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ - "ဒေသခံတစ်ဦးပရင်တာ Add".
ထိုအခါကွန်နက်ရှင်ဆိပ်ကမ်းကိုအပေါ်ဆုံးဖြတ်။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်အလိုအလျောက် set ကိုတနျဖိုးကိုပြောင်းလဲရန်, ထို့နောက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်လာမယ့်အပိုင်းကိုသွား "Next ကို".
စာရင်းပေး, ကိရိယာထုတ်လုပ်သူ set - Canon ၏။ ထိုအခါ - မိမိအမည်, ကို Canon MG2440 ။
တပ်ဆင်၏နောက်ဆုံးအချက် setting များကိုဝေမျှပါလိမ့်မည်။ လိုအပ်ခဲ့လျှင်, သင်ကတင်သွင်းနိုင်ပြီး, ထို့နောက်ရိုးရိုးစာနယ်ဇင်း, အ setup ကိုမှပြန်လာပါလိမ့်မယ် "Next ကို".
ပရင်တာများအတွက်ယာဉ်မောင်းကို install ၏လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်အသုံးပြုသူများအတွက်အချိန်ကုန်မဟုတ်သောအရာမဆိုအခြားပစ္စည်းကိရိယာများ။ သို့သျောလညျးကို pre-သငျ့သညျကိုအကောင်းဆုံးကိုရွေးပါအားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှ options များစဉ်းစားပါ။